Magaalaa Finfinneetti sababa roobni guddaa roobeef lolaan qabeenyaafi lubbuu namootaa mancaase. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMagaalaa Finfinneetti sababa roobni guddaa roobeef lolaan qabeenyaafi lubbuu namootaa mancaase.
Magaalaa Finfinneetti sababa roobni guddaa roobeef lolaan qabeenyaafi lubbuu namootaa mancaase.
Hagayya 17,2021 waaree booda rooba humna guddaatiin roobe sababeeffachuun magaalaa Finfinnee bakkeewwaan tokko tokkotti, sababa lolaatiin balaan lubbuufi qabeenyarra qaqqabuu Bulchiinsi Magaalichaa ifoomseera.
Kantiibaan magaalaa Finfinneefi miidiyaalee mootummaa balaa lolaa uumamee kana sababeeffachuun lubbuun nama meeqaa akka darbe kan hin ifiomsine yoo ta’u, balichis to’atamuu ibsankk turan.
OMN bakka balaan itti uumame sanarra akka odeeffatetti, bakkeewwan muraasatti hanga yoonaa balaan qaqqabe hagam guddaa akka ta’eefi qabeenyaafi lubbuu hangam akka mancaase kan hin qulqulla’in jiruu ta’uusaa akkasumas ammoo daa’imman mana keessatti lolaan itti seene balaa-baraartotaan barbaadamaa kan jiran ta’uu OMN odeeffateera.
Magaalaa Finfinnee Naannoo Xoor haayiloochiifi Asiraa simmit jedhamuun beekaman balaa lolaatiin rakkoo salphaa qabeenyaafi namarra qaqqabuu kan odeeffanne yoo ta’u, Bakkanniisaa naannoo Addabaabayi Jarmanitti garuu balaan uumame ammallee hin tasgabbaa’in jiraachuufi hanga yoonaa lubbuu nama shanii olii darbuu OMN nama bakka sana jirurraa odeeffateera.
Bala baraartonni bakka sanatti argamuun, kuufama bishaanii cabsanii dhangalaasuun namoota lubbuun hafan baraaraa jiraatanis, namoonni lubbuun darban ammallee dabaluu malu sodaa jedhu qabaachuu isaaniis maddi keenya garasirra dubbisne himee jira.